Casharkaan oo loogu magac daray alifbeetada Ingiriiska iyo xarfaha Ingiriiska, waxaan ku baran doonaa alifbeetada Ingiriiska, xarfaha ku jira alifbeetada Ingiriiska, ku dhawaaqida iyo qorista xarfaha Ingiriiska. Muxaadaradeenna alifbeetada Ingiriisiga, waxaan sidoo kale ku soo dari doonaa weedho muunad ah oo ku saabsan xarfaha Ingiriiska.
Xarfaha Ingiriisiga waxay u adeegsadaan xarfaha farta Latin sida Turkiga. Qodobkaan Xarfaha Ingiriisiga Waad baran kartaa maadada. Higaadda xarfaha Ingiriiska iyo Ku dhawaaqida alifbeetada Ingiriisiga Waxaad arki kartaa muxaadarada.
Immisa xaraf ayaa ku jira xarfaha Ingiriiska?
Xarfaha Ingiriisiga; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Waa guud ahaan 26 xaraf, oo ay ku jiraan Z. 21 ka mid ah xarfahaasi waa shibbane shanna waa shaqal. Shaqallada ayaa muhiim u ah luuqadda Ingiriiska, laakiin way adag tahay in la barto maxaa yeelay waxay samayn karaan dhawaaqyo dhaadheer iyo kuwo gaagaaban labadaba. Si ka duwan Turki xarfaha q, w, x Waxaa.
Xarfaha ç, ğ, ö, ş, ü oo af turki ah kuma qorna ingiriisiga. Waa luqad aan loo aqrin sida ay ugu qoran tahay Ingiriis. Intaas waxaa sii dheer, higaada xarfaha yar yar sida xarfaha waaweyn sidoo kale way ka duwan tahay.
Hadda aan marka hore siino alifbeetada Ingiriisiga oo leh sawirro. Goor dambe, waxaan qori doonnaa dhammaan xarfaha oo aan ku sharxi doonaa ku dhawaaqidda xaraf walba mid mid iyadoo ereyo muunad ah.
Xarfaha Ingiriisiga - Oo leh Sawirro
Xarfaha Ingiriiska, Waraaqaha Ingiriisiga iyo Ku Dhawaaqa
Liistada hoose, waxaad ka heli kartaa higaadinta ereyada ka kooban alifbeetada Ingiriisiga sida xuruufta yaryar iyo kuwa waaweyn, iyo sidoo kale ku dhawaaqiddooda. Ogaanshaha alifbeetada ayaa muhiim u ah hagaajinta xirfadahaaga akhriska iyo kalsooni badan oo aad ku qabtid xirfadahaaga Ingiriisiga. Liiskan, waxaad ka heli kartaa xaraf kasta oo ku dhawaaqistiisa xarfaha waaweyn iyo hoose.
h - H - furitaanka
i - I - bil
k - K - fure
l - L - gacanta
s - S - daas
w - W - faafiyay
x - X - jir
y - Y - waaw
Gaar ahaan marka la barayo waraaqaha Ingiriisiga ee ardayda dugsiga barbaarinta iyo kuwa dugsiga hoose heesta alifbeetada ama Xarfaha Ingiriisiga fiidiyow waad ku taageeri kartaa
Waxaad si fudud ugu baran kartaa mowduucan adoo ku dhawaaqaya dhawaaqa jumlado muunad ah adoo dhageysanaya sida xaraf kasta loogu dhawaaqo. Isla mar ahaantaana, markaad daawato taxanaha TV-yada ajnabiga ah ama aflaanta leh turjumaadaha Ingiriisiga ah iyo cod-bixiyayaasha Ingiriisiga, waxaad si fudud u arki kartaa higgaadinta iyo ku dhawaaqidda xukunka.
Sida loo Aqriyo Waraaqaha Ingiriisiga
Sidee loo Aqriyaa Xarafka A ee Ingiriisiga?
Da'da (eyc): da'da
Xayawaan (enimil): xayawaan
Sidee loo Aqriyaa Xarafka B oo Ingiriis ah?
Shimbir (börd): shimbir
Sidee loo Aqriyaa Xarafka C ee Ingiriisiga?
Ma jiraan raasumaal O iyo saddex xaraf oo yaryar oo Ingiriis ah. Ku dhawaaqida xarafka C way ku kala duwan tahay hadba ereyga ay ku taalo. Ujeeddada xusiddu waa marka xuruufta c iyo h ay is dhinac socdaan, xarafku inta badan wuxuu u dhawaaqaa saddex. Waxay kaloo u dhawaaqi kartaa "ch" "k" iyadoo loo eegayo asalka ereyga.
Kaalay (cam): kaalay
Sidee loo Aqriyaa Xarafka D ee Ingiriisiga?
Ey (eey): eey
Sidee loo Aqriyaa Xarafka E ee Ingiriisiga?
Xarafka E sidoo kale wuxuu leeyahay dhawaaqyo kala duwan iyadoo loo eegayo asalka ereyga.
Ukun (tusaale): ukun
Eye (moon): isha
Cun (iit): in la cuno
Sidee loo Aqriyaa Xarafka F oo Af Ingiriisi ah?
Qoyska (dhedig): qoyska
Sidee loo Aqriyaa Waraaqda G ee Ingiriisiga?
Ma jiraan "ğ" oo alifbeetada Ingiriisiga ah.
Ciyaar (gay): ciyaar
Gabar (eeg): gabar
Sidee loo Aqriyaa Xarafka H oo Ingiriis ah?
Farxad (hepi): faraxsan
Koofiyad (het): koofiyad
Sidee loo Aqriyaa Waraaqda Ingiriiska I?
Ma waxaan ku haystaa Ingiriis Xarafka I ee erayga xiisaha leh / xiisaha leh, waxaan ku aragnaa isbeddelka qaab-dhismeedka warqaddan. Ma jiraan raasumaal I iyo xarfaha yar oo aan ku qoro Ingiriis.
Aniga (bisha): Aniga
Baraf (ays): baraf
Sidee loo Aqriyaa Xarafka J ee Ingiriisiga?
Ku biir (lacagta): ku biir
Boodbood (kaam): bood
Sidee loo Aqriyaa Xarafka K oo Ingiriis ah?
Xarafka K wuxuu ku kala duwan yahay hadba ereyga uu ku yaal.
King (king): boqorka
Ogow (nov): inaad ogaato
Xusuusin: Xarafka k lama aqriyo markay xarfaha Kn is dhinac socdaan.
Sidee loo Aqriyaa Xarafka L oo Ingiriis ah?
Luuqad (lenguic): luuqad
Sidee loo Aqriyaa Xarafka M oo Ingiriis ah?
Lacag (mania): lacag
Hooyo (madir): hooyo
Sidee loo Aqriyaa Xarafka N oo Af Ingiriisi ah?
Magaca (neym): magac
Cusub (niüv): cusub
Sagaal (nayn): sagaal
Sidee loo Aqriyaa Xarafka O oo Af Ingiriisi ah?
Ma jiraan xarfo far sare iyo hoose oo alifbeetada Ingiriisiga ah.
Furan (ra'yi): fur
Mid (van): mid
Sidee loo Aqriyaa Waraaqda P ee Ingiriisiga?
Sawir (picchır): sawir
Ciyaar (pley): ciyaar, ciyaar
Sidee loo Aqriyaa Xarafka Q oo Af Ingiriisi ah?
Degdeg ah (kuik): degdeg ah
Sidee loo Aqriyaa Waraaqda S oo Af Ingiriisi ah?
Ma jiro xaraf "ş" oo ku qoran Ingiriis. Markay xarfaha S iyo h is dhinac socdaan, waxay siisaa dhawaaqa "ş".
Bad (sii): bad
Sheeko (fadhiisin): sheeko
Sidee loo Aqriyaa Xarafka T oo Ingiriis ah?
Marka xarfaha "th" ay is dhinac socdaan, ku dhawaaqida waxaa loo go'aamiyaa iyadoo loo eegayo asalka ereyga.
Miis (cajalad): miis
Ka fikir (tink): inaad fikirto
Tani (dis): kan
Sidee loo Aqriyaa Xarafka U oo Ingiriis ah?
Ma jiro xaraf "ü" oo ku qoran Ingiriis.
Isticmaal (yuuz): si aad u isticmaasho
Caadi ahaan (yujıl): caadi ah
Hoos (daqiiqad): hoosta
Sidee loo Aqriyaa Xarafka V oo Ingiriis ah?
Aad (xog): aad iyo aad
Booqo (booqasho): booqasho
Codka (vois): codka
Sidee loo Aqriyaa Waraaqda W ee Ingiriisiga?
Dagaal (vor): dagaal
Guul (vin): guule
Khaldan (rong): qaldan
Xusuusin: Marka xarfaha "wr" ay is dhinac socdaan, W lama aqrinayo, yacni codka V la maqli maayo.
Sidee loo Aqriyaa Xarafka X oo Ingiriis ah?
Raajo (raajo hore): raajo
Xerox (zirox): nuqul
Sidee loo Aqriyaa Xarafka Y oo af Ingiriis ah?
Haa (haa): haa
Yar (yang): dhalinyaro
Sidee loo Aqriyaa Xarafka Z oo Ingiriis ah?
Sifir (ziro): eber
Soo gaabin badan oo Ingiriis ah si loogu dhaqmo xarfaha Ingiriiska, Sida loo qoro nambarada ingiriisigaWaa inaad fiiro gaar ah u leedahay arrimaha sida cinwaannada. Waxaad ku hormarin kartaa shaqadaada adoo aqrinaya jumlado muunad ah ama qoraallo tusaalooyin ah oo ku saabsan mowduucaan. Daawashada fiidiyowyada alifbeetada Ingiriisiga iyo dhageysiga heesaha alifbeetada Ingiriisiga waxay ku siin doonaan horumar badan oo arrintan la xiriira.
Saaxiibbada qaaliga ah, waxaad aqrinaysaan mowduuca xarfaha alifbeetiga ee Ingiriiska. Haddii aad rabto inaad aragto dhammaan casharradeena kale ee Ingiriisiga, guji halkan: Casharada Ingiriiska
Taariikhda Alifbeetada Ingiriisiga
Ingiriiska; Waxay leedahay ereyo ka yimid luqado badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan Faransiis, Griig, iyo Latin. Waxaad ku arki kartaa tan higaadinta ereyo badan oo Ingiriis ah. Wuxuu raacayaa xeerka dhawaaqa Ingiriiska; si kastaba ha noqotee, ereyadan lagu daray awgood, sharciyadu way adag yihiin in la barto lana dabaqo.
Ilaa 1835, Alifbeetka Ingiriisiga wuxuu ka koobnaa 27 xaraf: xarafka 27-aad ee alifbeetada midig kadib "Z" wuxuu ahaa "iyo" calaamadda (&).
Maanta, Alifbeetka Ingiriisiga (ama Xarfaha Ingiriisiga Casriga ah) wuxuu ka kooban yahay 26 xaraf: 23 laga soo qaatay Ingiriisigii hore iyo 3 ka dib lagu daray.
Ereyada alifbeetada Ingiriisiga
VW iyo XYZ
Waan heesi karaa ABC-yada,
Aniga ilama heesi doontid
Sidee Loo Bartaa Waraaqaha Ingiriisiga Ardayda Dugsiyada Hoose?
Inta ay baranayaan Ingiriisiga, ardayda dugsiga hoose waxay marka hore ku bilaabi doonaan mowduuca xarfaha. Si aad ugu hormariso arrintaan, waxaad ku kala duwanaan kartaa da'da; Waxaan kugula talineynaa inaad barato 5 xaraf casharkiiba 7 ilaa 3 sano iyo 7 xaraf casharkiiba caruurta ka weyn 5 sano. Waxaad kubilaabi kartaa xarfaha yar waxaadna kusii gudbi kartaa xarfaha waawayn kadib markay ardaydu sifiican u barteen.
Markaad baraysid xaraf kasta, waxaad u adeegsan kartaa howlo aad ku carbiso oo aad ku xoojiso xaraf kasta. Waxqabad tusaale ah;
Carruurtu waxay jecel yihiin inay wax ku qoraan sabuuradda ama sabuuradda. Markaad barato xaraf kasta, sii ardayga nuurad / calaamadee oo weydii inuu ku qoro warqadda sabuuradda (inta ugu badan ee suurtogalka ah). Waxaad ku heli kartaa in ka badan hal arday oo sidan ku sameeya warqad kasta.
Layli kale ayaa noqon kara in la waydiiyo inuu magaciisa u qaybiyo dhawaaqyo. Aan tusaale u soo qaadanno qoraal;
Su'aalaha laga weydiin karo higgaadinta,
- "Sidee ayaad u higgaadisaa magacaaga?"
- "Miyaad higgaadin kartaa magacaaga, fadlan?"
- "Magacaygu waa Mete, METE"
Aan weydiinno qof magaciisa iyo sida loo higgaaddo. Ka dibna u soo bandhig magacaaga iyo higgaaddiisa. Waa tan tusaale:
Magacaygu waa …….
-Sidee ayaad u higgaadisaa magacaaga?
Waa… .. -… .. -… .. -
Su'aalaha Muunadda Afka Ingiriisiga
Sidee loogu dhawaaqaa xarafka A ee alifbeetada Ingiriisiga?
Sidee loogu dhawaaqaa xarafka W ee alifbeetada Ingiriiska?
B. dublu iyo
C. labalaab iyo
Waraaqaha soo socda midkee ayaa lagu heli karaa af Turki laakiin Ingiriisi maahan?
Waraaqaha soo socda midkee lagu heli karaa Ingiriis laakiin aan lagu heli karin Turkiga?
Xarafka keebaa loo aqrinayaa sida ZED alifbeetada Ingriiska?
Sidee loogu dhawaaqaa xarafka J ee alifbeetada Ingiriisiga?
Waraaqaha soo socda midkee ayaan laga heli karin xuruufta Ingiriisiga?
Kuwa soo socda midkee shibbane?
Sidee loogu dhawaaqaa xarafka M oo af Ingiriisi ah?
Sidee loogu dhawaaqaa xarfaha midba midka kale ku xiga Ingiriisiga?
Sidee loogu dhawaaqaa xarfaha oe ee isku xiga af Ingiriis?
Sidee loogu dhawaaqaa eray qor?
Sidee loogu dhawaaqaa erayga qorshe?
Guud ahaan Muujinta Mawduuca Ingiriisiga Waxay u muuqan kartaa mid fudud jaleecada hore. Laakiin waxaad ogaan kartaa in xaraf kastaa yeelan karo ku dhawaaqyo badan oo kala duwan. Waraaqaha qaar kumajiraan af Turki. Qodobkaan, hadafkeenu waa inaan nadiifino jahwareerkaaga oo barashada alifbeetada Ingiriisiga ka dhigno mid aan walwal lahayn.
Sidee Loo Xasuustaa Waraaqaha Ingiriisiga Si Fudud?
Cutubkan Si fudud u xafidi waraaqaha Ingiriisiga Waxaan ku siin doonaa xoogaa tabaha ah.
Waa muhiim in la dhageysto ku hadalka afkiisa hooyo si loo barto sida loogu dhawaaqo xaraf kasta. Xusuusnow inay aad u adkaan doonto in la fahmo dadka ku hadla Ingiriisiga marka la hadlayo. Haddii aad ku cusub tahay Ingiriisiga, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso dhageysiga Podcast Ingiriis ah oo loogu talagalay in lagu baro Ingiriisiga bilowga.
Qor heestaada alifbeetada ah: Isku day inaad raadiso waddo kuu gaar ah oo aad ugu heesi karto alifbeetada ama aad ugu heesaysid xarfaha si waafaqsan heesta pop-ka aad ugu jeceshahay. Adiga oo sameeya hees kuu gaar ah, waxaad ka dhigi kartaa heesta mid soo jiidasho leh.
Ku xir xarfaha ereyo gaar ah. Sida ugu fudud ee tan lagu sameyn karaa waa in la qoro sheeko ka kooban 26 eray oo eray kastaa ku bilaabmayo xaraf ka duwan oo alifbeetada ah.
Quraacda kadib bisaduhu wax walba way burburiyeen. Kalluunka, ciyaaraha, alaabada guryaha ...
Isticmaal xusuustaada adoo sheekada sii wadaya iskuna day inaad adeegsatid dhammaan 26-ka xaraf markooda. Xusuusnow, maahan inay macno buuxa samayso! Markay sheekadu u badan tahay doqon, waxay u badan tahay inaad xasuusato, markaa hubi inaad baashaal sameyso inta aad jimicsigan baraneyso!
Intaad baraneyso alifbeetada Ingiriisiga, waa inaadan dhaafin ku celcelinta iyo dhageysiga dhawaaqyada dhawaaqa. Barashada erey si fudud loo xasuusto oo ku xiga warqad waliba waxay kaa caawin kartaa inaad si fiican u xasuusato xarfaha. Tan awgeed, waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa ereyada aan soo sheegnay tusaale ahaan xaraf walba.
Xarfaha Ingiriisiga looguma hadlo sida aan wax ugu qorno oo ugu dhawaaqno af Turki, dhawaqyada waa kala duwan yihiin. Ku dhawaaqida xuruufta Ingiriisiga way ku kala duwan tahay erey ilaa erey. Sababta ugu weyn ee khilaafkani u yahay asalka ereyga. Sidaa darteed, higgaadinta iyo ku dhawaaqidda dhammaan xarfaha Ingiriisiga way ka duwan yihiin. Xarfahaasi waxay soo saaraan afartan iyo afar nooc oo dhawaaqyo kala duwan ah. Xaqiiqda ah inay jiraan noocyo dhawaaqyo ka badan tirada xarfaha alifbeetada ayaa runti adkaynaysa barashada alifbeetada. In kasta oo ay fududahay in la xafido xarfaha, arinta xarafkee lagu aqrinayaa dhawaaqa erayga wuxuu abuuri karaa jahwareer.
Ugu horreyntii, waxaad isku dayi kartaa inaad dhageysato heesaha alifbeetada Ingiriisiga si aad u barato una xoojiso aqoontaada xarfaha Ingiriisiga. Waxa kale oo aad xafidi kartaa ereyada fudud iyo waraaqaha adoo daawanaya kartoonada Ingiriisiga si aad si fudud wax uga baratid. Dhageysiga heesaha Ingriiska iyo daawashada kartoonada ayaa kaa caawin doona inaad ku barato alifbeetada Ingiriisiga farxad iyo inaad si cad u fahamto ereyada fudud Si aad u baratid sida loogu dhawaaqo ereyada Ingiriisiga, waad ka qaybqaadan kartaa waxqabadyada aad ku tababbaran karto had iyo jeer ku hadalka. Barashada alifbeetada Ingiriisiga waa tallaabada ugu horreysa ee barashada Ingiriisiga.
Ardayda qaarkood waxay rabaan inay ogaadaan xirfadda ka muhiimsan. Marka waxay qorsheynayaan inay ku bilaabaan kan ugu muhiimsan marka hore. Dhammaantood way xisaabtamayaan, maadaama xirfadaha oo dhami ay ku saleysan yihiin midba midka kale. Si kastaba ha noqotee, waxaan u isticmaalnaa xirfadaha qaar inta badan kuwa kale si aan ula xiriirno. Tusaale ahaan, qiyaastii 40% waqtiga aan ku bixino isgaarsiinta, kaliya waan dhageysaneynaa. Waxaan hadleynaa qiyaastii 35% waqtiga. Qiyaastii 16% isgaarsiintu waxay ka timaaddaa akhriska iyo ku dhowaad 9% qoraalka. Markaad baranayso Ingiriisiga, nooc daraasad ah ha u gudbo mid kale. Tusaale ahaan, akhri sheeko kadibna kala hadal saaxiibkaa. Daawo filim ka dibna wax ka qor.
Way adkaan kartaa inaad wax uun ka bilowdo xoq, gaar ahaan haddii aad barato qorista luuqad gabi ahaanba ka duwan taada. Runtii waxay lamid tahay inaad kaligaa ku socoto meel aan gebi ahaanba la aqoon. Laakiin waxaad si fudud wax uga baran kartaa tusaalooyinka iyo layliyada ku jira maqaalkan.
Hayso buug yar si aad u barato ereyada cusub. Halkan, ku qor ereyada aad hadda ku baratay siday u kala horreeyaan. Marka waad arki kartaa oo xafidi kartaa eray walba sifiican. Muxaadarooyinka Mawduuca Ingiriisida Ha ka boodin ku-tababbarka iyo xallinta su'aalaha imtixaanka isla markiiba ka dib casharka tababarka. Ingiriisiga waxaa lagu bartaa si fudud oo dhaqso badan marka aad maalin kasta la kulanto.